China Life Life marble Akpụrụ akpụ nke Lady nke Ugwu Kamel maka ire Nlụpụta na Factory | Ezigbo Arts
Ndụ Life marble Statue of Lady of Mount Carmel maka Ire
Nọmba nlereanya: FMQ-225
Size: H ： 170 cm ma ọ bụ ahaziri ya
Maka ụka ọ bụla nke na-akpali okwukwe na nraranye nye Virgin Mary, ihe oyiyi ndụ nke Virgin Mary na Ugwu Kamel bụ nkà ime mmụọ zuru oke. Ihe oyiyi anyị bụ marble. Na ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka ime ụlọ na n'èzí.
Iwu Carmel dị oke egwu, mana dịka echiche Santa Teresa si kwuo, ọ nwere olile anya na nwa ya nwanyị agakwaghị abụ onyeozi, na nwa ya nwanyị nwere ike inyere ndị ụka na ndị pastọ aka ma gbasaa alaeze Chineke. , Ha na-anụ ọkụ n'obi ịnakwere ịnụ ọkụ n'obi nke ekpere nke eluigwe na ala.
Ihe eji akuku marble anyi jiri aka mee ya, ulo uka nke Nwanyi Anyi nke Ugwu San Carmel na-ejide nwatakiri aka na aka ekpe, na-eyi okpu eze mara mma na uwe mara mma. Feetkwụ nkịtị, na-elepụ anya n'ọdịnihu, na-amụmụ ọnụ ọchị na imi mara mma, na-egosi ọmarịcha ịdị mma, obiọma, obi ụtọ ma chekwaa nke Virgin, na-emeso nkọwa niile n'ụzọ zuru oke. Uwe rụrụ arụ gbara ahụ dum gburugburu site na isi, ụkpụrụ ahụ wee gbanwee Eke na chic, ma ọ bụ ụkpụrụ okpueze, udiri uwe mwụda ma ọ bụ ihe akpụrụ akpụ ọzọ.
Ihe oyiyi nke Virgin Saint Carmel bụ nke ejiri ocha mabul. Nke a bụ nnukwu okwute marble nke okpukpe, sie ike nke ukwuu, dabara adaba maka ime ụlọ na n'èzí, ma nwee ike iji ya mee ihe na ihu igwe na-adịghị mma. Ọ bụ ndị ọkachamara marble na-arụ ọrụ arụsị ọsịsị anyị niile nwere ọmarịcha ọrụ na ịkpụpụta ihe oyiyi okpukpe.
Ndi aka ocha marble bu onye aka anyi. Niile nkọwa zuru oke esichara. Ọ bụrụ n ’inwe mmasị n’ihe osise okpukpe anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka nkọwa ngwaahịa zuru ezu. N'ezie, ị nwekwara ike ịlele ihe osise ndị ọzọ ebe a.
Nke gara aga: aka pịrị mma mara mma na-acha ọcha marble bust maka Sale
Osote: Omenala Mere marble St Michael na Teyepac Hill ihe akpụrụ akpụ maka ire ere
Factory tinyekwa mara mma na-acha ọcha marble Virgin Ma ...
Omenala mere ihe oyiyi okpukpe ezinụlọ maka Ere
ọmarịcha marble mara mma nke obi dị nsọ nke ...
N'èzí marble okpukpe anyị nwaanyị nke Lourdes st ...
Ndụ Ndụ Okpukpe nke St. Francis Gard ...
Markpụrụ marble pieta ụlọ ọrụ maka ire ere